Nin bistoolad ka dafay mid ka mid ah askarta ammaanka garoonka diyaaradaha ee Orly oo la dilay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Nin bistoolad ka dafay mid ka mid ah askarta ammaanka garoonka diyaaradaha ee Orly oo la dilay (SAWIRO)
Nin ayaa lagu dhex toogtay saakay 8:30 garoonka diyaaradaha ee Orly oo ku yaalla magaalada Paris ee dalka France, kadib markii uu bistoolad ka dafay mid ka mid ah askarta ammaanka sugta, kadibna ku dhex cararay suuq ku yaala garoonkaasi gudihiisa.
Ciidanka booliska ee la dirira argaggixisada ayaa baadi-goob ka wada garoonka oo laga yaabo in qofka dhintay uu meel ka mid ah uga tagay wax qarxi kara, waxaana loo digay dadka inay goobta baaristu ka socoto ka dheeraadaan.
Garoonka Orly oo ah midka labaad ee ku yaalla magaalada Paris ee caasimadda dalka France ayaa muuqaalo laga soo duubay waxaa laga dareemayaa argaggax ka muuqda dadkii ku sugan garoonka intay socotay daad-guraynta.
TV laga leeyahay France BFM ayaa kusoo warramay inuu nin isku dayay inuu askari ka dafo bistoolad kadibna askarigii uu rasaas ku furo ninkii soo weeraray.
Booliska ayaa raadinaya inay jirto cid kale oo falkaas ku wehlisa ninka la toogtay ama waxyaabo qarxa.
Sidoo kale, booliska ayaa baraha bulshada ku qoray . “Wali waxaa socda baaris, waxaan ogaysiinaynaa dadka inay ka dheeraadaan garoonka.”
Qof rakaab ah oo wali saaran diyaaraddii uu la socday oo barxadda garoonka ku sugan ayaa isna ku qoray Twitter-ka, “Rasaas ayaa laga maqlayaa garoonka Orley terminalka koonfureed”.
Gabar la yiraahdo Isabelle Raynaud ayaa iyaduna Twitter-ka waxay ku qortay. “Waxaan ku xannibanahay diyaaraddii garoonka Orly rasaas ayaa ka dhacday”.
Dalka France ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay ku jira sharci ah “Xaalad degdeg ah” kaddib weerarro is xigxiga oo ka dhacay dalka oo ay ka dambeeyeen Daacish iyo Alqaacidda.